Umgaqo-nkqubo kwaye emidlalo kuba yokufumana Russian ubumi - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Umgaqo-nkqubo kwaye emidlalo kuba yokufumana Russian ubumi
Eziyi-it wonk ubani kwezabo izizathu
Ngonyaka inani abantu wishing ukuba bathenge ubumi lethu ngu-ngokwandisa amaxesha aliqelaHo ukuba baluthabatha ulawulo lwe-Russian incwadana yokundwendwela, omnye umnqweno ayikho ngokwaneleyo. Ukuqonda ukuba ngubani unelungelo rely kwi-ingxowa-a-Russian incwadana yokundwendwela, kuyimfuneko ukuba isicelo federal umthetho 'Kwi Ubumi ye-isirashiya' ka. Kubalulekile ukuba kubekho ukuba uyakwazi ukufumana iimpendulo lo mbuzo, ukuba oko emidlalo kuba yokufumana Russian ubumi zikho namhlanje. Ezine amanqaku ingaba kuchaziwe. Ngoko ke, incwadi yokundwendwela ye-isirashiya kusenokuba acquired: jikelele, ezi izibonelelo ingaba kakhulu blurred, ngoko ke kukunceda kakhulu digging kwi iinkcukacha ukuqonda kwesi sihloko. I-th inqaku eli Federal Umthetho uchaza kwi-inkcukacha njani kufumana ubumi ye-isirashiya kwi-jikelele emidlalo. Ithi ukuba wonke omdala isemthethweni umntu unelungelo ukwenza njalo. Kodwa kuphela ukuba yena: Ngomhla wokugqibela incopho kukho umdla nuances. Ixesha yokuhlala kusenokuba ukuphumela omnye unyaka ukuba umntu nokufaka ubumi: abanye abantu azidingi na isiseko kuba yokufumana Russian ubumi ukusuka ngentla. Oku kwenziwa abantu abathe ezikhethekileyo merits phambi Saserashiya.
Efanayo kubo abemi ka-ichaza ukuba kusetyenziswa kuba yinxalenye USSR, othe wasebenza kuba ubuncinane iminyaka emithathu kwi isivumelwano ne-Russian Armed Imikhosi okanye ezinye military formations.
Ngoko ke, baba ngaphezu briefly wachaza emidlalo acquisition ka-Russian lobumi. Kwi-esenziwe lula ukuze, yonke into ikhangeleka nangakumbi iindlela zomzobo kwaye ngokulula. Ukuqonda essence lomgaqo-nkqubo, kufuneka nje kufuneka ukufunda th inqaku efanayo federal umthetho. Ithi malunga iindidi abantu abo banelungelo isicelo ngaphandle ithatha indawo yokuhlala amaphepha-mvume kwaye hayi ukuphila kufuneka emihlanu. Ngoko ke, aba ngabo foreigners abo: Ezi iimeko kukho simplest kwaye uninzi ngokufanayo. Zontathu emidlalo kuba kokufumana * ingaba weighty. Abantu abaninzi kuba ekhutshwe passports kwi mimiselo. Ewe, ukuba ke, asingabo bonke Kukho ezinye emidlalo kuba yokufumana Russian ubumi kwi esenziwe lula inkqubo. Immigrants angafaka isicelo sesibonelelo-Russian incwadana yokundwendwela ukuba baye: Njengoko ubona, iindlela ukufumana i-Russian incwadana yokundwendwela ayikho ke abancinane. Umntu othe akusebenzi fit yedwa onako rhoqo thatha ithuba omnye. Ukuba ngaba imali ezimbalwa yezigidi rubles kwi-uphuhliso lwamashishini, asinguye wonke ubani uyakwazi, ngoko ke u'a wafuna-emva specialty kwaye umsebenzi kuba iminyaka eliqela ngu iselwa lokwenene. Ezona kunzima iqonga ibandakanya imisebenzi yethutyana yokuba ngumhlali (RWP). Le yokuqala emva kwethuba ukufumana i-visa, nto leyo iza kuba okokuba ngokusebenzisa ukuba i-alien ongenawo a preferential isiseko soluvo yokufumana Russian lobumi. Ngenxa yayo ubhaliso, nangona kunjalo, phantse ngokufanayo amaxwebhu ziyafuneka. Apha uluhlu lwabo: Ke idla kuthatha iinyanga ezimbini emva ukuba ulinde isigqibo. Ngoko ke, kufutshane nje phambi kokuba indawo ephelela kuyo wokuqala unyaka emva issuance ye-RWP, foreigner kuya kufuneka ukuba anike FMS kunye isiqinisekiso besomeleza yakhe ingeniso. Ngoko ke, ngaphezu waxelelwa ukuba emidlalo kwaye inkqubo kuba yokufumana ubumi ye-isirashiya izimisele yi-Federal Umthetho. Kwi-siseko, kukho ngaphezulu amathuba kuba umxholo ka-Russia kwe-kubonakala. Kodwa asingabo bonke abantu correspond ukuze na ngaphezu iindidi.
Abaninzi kufuneka mba a yokuba ngumhlali.
Kwaye apha - yenza isangqa ka-zicelo anelungelo lokuba afumane olu xwebhu: Kulungile, bonke nuances malunga esa kundoqo iinkqubo baba ezidweliswe.
Kufuneka elungileyo isizathu yokufumana Russian lobumi
Kwaye ukuba umntu othe a isiseko soluvo yokufumana Russian ubumi, zonke kubo wathabatha ingqalelo, unako ukuqalisa ukuqokelela ulwazi amaxwebhu kwaye yiya FMS kuba filing isicelo. Nantsi into kufuneka libekho: kubalulekile ukuqaphela ukuba kwi-langaphandle incwadana yokundwendwela kufuneka kubekho a stamp besomeleza i-alien ke ilungelo okwexeshana kuphila kwi territory ye-isirashiya. A notarized ukukopa eli phepha kanjalo ezifunekayo. Njengoko kufuneka babe guess, izizathu esenziwe lula ukufumana ubumi ye-isirashiya kuthetha ngokumnika i-immigrant a ngaphantsi kofakwano impahla lwamaxwebhu. Kwaye kukho Uluhlu iqulathe kuphela ezisixhenxe inkqubo ephantsi-izinto. Apha ke oko kufuneka libekho: Eli engundoqo uluhlu securities. Undoubtedly, ngokuxhomekeke kwindawo ethile kunjalo, kuya kuba replenished. Igama na ezintathu emidlalo kuba yokufumana Russian ubumi - get ezininzi ngakumbi uluhlu kunye efanayo inani izinto. Kukho ibe isiqinisekiso-sicelo ke ubumi ye-USSR, uxwebhu kwi-incapacity, idiploma, iphepha kwi imisebenzi, njl-njl. Kulo naliphi na ityala, uluhlu, kufuneka echaziweyo kwi oyedwa qho. Le nkqubo evumela ukuba umntu ukuba abuyele a ngaphambili ezilahlekileyo ubume a ummi ye-isirashiya. Ukuze yenze imisebenzi yayo, kufuneka anike zilandelayo uluhlu lwamaxwebhu: Ukuba bonke namaphepha angama-ingaba yesebe eqokelelweyo, ngoko ke reintegration iya kuba bamthwala ngaphandle ngokukhawuleza. Kule nkqubo, umthetho ngu njengoko loyal kangangoko kunokwenzeka.
Ukuba foreigners abo wenze isigqibo ukufumana Russian ubumi kuba abantwana, ngoko ke baya kananjalo kufuneka ukuqokelela efanayo impahla lwamaxwebhu.
Umntwana ka-ishumi elinesine ishumi elinesibhozo leminyaka ubudala, kuya kufuneka ukuba unike a imvume ebhaliweyo.
Kuya qinisekisa yakhe readiness kwaye personal conscious umnqweno ukufumana Russian lobumi.
Ukuba umntwana ayikho ishumi elinesine ubudala, ngoko ke oku imvume ngu wazaliswa yi-ezimbini abazali. Abantwana xa kokufaka izicelo kwi-FMS kufuneka kanjalo kubekho ikhoram. Kwahluka kuphela yi-abo bangenalo kanti ingenile conscious ubudala. Ezininzi nuances kusenokuba wathi, malunga qho ngonyaka inkqubo kuba yokufumana Russian lobumi. Akunakwenzeka hayi umzekelo-icatshulwe i-ukubamba ixesha. Umgaqo-nkqubo kuba yokufumana Russian ubumi complex kwaye ixesha elide. Ukuba foreigner efake amaxwebhu kwi-jikelele emidlalo, ngoko ke uya kuya kufuneka ulinde kude kube unyaka omnye. Ngoko ke, kubaluleke kakhulu elicetyiswayo ukuba ufuna ngenyameko ukuqokelela kwamaxwebhu kuba filing. Kuya kubakho imposiso - kufuneka qala zonke phezu kwakhona. Ukuba umntu usebenza kuba esenziwe lula iimeko, ulinde ixesha liya kuba malunga nesiqingatha ngonyaka. Kunokwenzeka ukuphumela kwiinyanga ezintathu. Kodwa kuphela ukuba immigrant ngu-a s somlomo we-Russian ulwimi, ummi ka-Belarus, Kyrgyzstan kwaye Ekazakhstan okanye i-nxaxheba kwi-resettlement lwenkqubo. Kulo naliphi na ityala, umntu uza kwaziswa ye-FMS isigqibo ngaphakathi kwiintsuku ezingamashumi amathathu ukususela ngomhla yayo issuance. Ngoku ukuba wonke isiseko soluvo yokufumana Russian ubumi wenziwe lezinto ezinako ukwenzeka, lubandakanya, uyakwazi jonga Inqaku We. Oko sichaza kwiimeko apho immigrants kusenokuba ngokusemthethweni saliwe ubhaliso i-Russian incwadana yokundwendwela.
Ngoko ke, umntu akufunekanga silindele ukufumana Russian ubumi ukuba yena: Proceeding ukusuka zonke ezidweliswe, kuyenzeka ukuba urhulumente kunye ukukholosa ukuba ngezizathu kuba ukwaliwa kwesicelo ukufumana Russian * ingaba ngenene weighty kwaye logically reasoned.
China Ishishini Zokugcina - China Umthetho Hetalia
Xina IP Despatx - la Llei de Propietat Intel·lectual